Banksy dia nanao ny fisehoany ho mpandraharaha London Underground | Famoronana an-tserasera
Un horonantsary izay ahitantsika an'i Banksy manao ny zavatra farany miaraka amin'ireo graffiti ireo, ary amin'ity indray mitoraka ity dia be dia be ny voalavo miaraka amin'ny sarontava ao amin'ny Underground London. Toa tsy mampino ny fahitantsika azy amin'ny asany miaraka amin'ny tsy fahazoana antoka rehetra ao ambadiky ny endriny, satria hatramin'izao dia niseho tamin'ny rindrina foana ny asany, nefa tsy nahalala na inona na inona momba azy.
Miaraka amin'ny hood ianao dia afaka mahita azy araka ny asehon'ny fiara London Underground amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ho mpandraharaha iray mitovy amin'izany. Sehatra iray nahasarika ny sain'ny maro ny fahitana azy mihetsika ary azonao jerena eto ambany avy amin'ny kaonty Instagram-ny.
Nandefa hafatra misy ambadika ihany koa izy: "Raha tsy misaron-tava ianao dia mbola tsy tratra". Amin'ity horonantsary azonao jerena eto ambany ity izay ananantsika segondra vitsy monja hahitana azy miaraka amin'ny saron-dohany sy ny fomba anehoany ny atin'ny kalesy miaraka amin'ireo voalavo marobe; izay eny an-dalana koa manao ny saron-tava.
. . Raha tsy misaron-tava ianao dia tsy mahazo.
Lahatsoratra iray nozarain'ny Banksy (@ banksy) amin'ny Jul 14, 2020 ao amin'ny 6: 30 amin'ny PDT
Hafatra roa sosona izay manazava ny fikasan'i Banksy ary tena nahitam-bokatra izy tato anatin'ny volana vitsivitsy izay nanovan'ny coronavirus ny tontolon'ny fiarahamonina, ny tsirairay ary ny toekarena eto an-tany.
nefa Nanafina ny tarehiny foana i Banksy, na dia farafaharatsiny farafaharatsiny afaka mahita ny toe-batany isika ankehitriny ka manintona kely kokoa ny sariny ara-batana. Hatramin'izao dia nijanona tao anaty alokaloka izy nefa tsy namela soritra ny mombamomba azy. Ary raha ny marina dia be ny tsaho raha io na ilay mpanakanto graffiti. Mbola hisy na angamba tsy ho fantatsika mihitsy hoe iza no tena ao ambadiky ny akanjon'io mpandraharaha io izay nahafahany niasa tamim-pahanginana tamin'io kalesy io tany London Underground.
Hanohy izany sary mahafinaritra izany izahay de nanome voninahitra ireo maherifon'ny trano fidiovana ary ny asany izany niseho tamin'ny sarontava avy amin'ny iray andro ka hatramin'ny ampitso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny voalavo mitafy saron-tava Banksy dia manafika ny London Underground